Kitapo sachet handoro menaka manitra | Asa tanana
Kitapo lamba handoroana ditin-kazo manitra
Tony Torres | | Asa-tanana amin'ny lamba, Asa tanana an-trano
Ireto kitapo lamba ireto hanamboarana menaka manitra ny efi-tranonao dia ireo famenon-javatra mety indrindra apetraka ao anaty lalimoara na fitafiana itahirizanao akanjo. Mora tokoa izy ireo manao an'izany amin'ny tolak'andro mitovy dia afaka manamboatra kitapo betsaka araka izay ilainao ianao, satria izy ireo dia azo ampiharina, misehoseho ary tonga lafatra mihitsy aza ho an'ny fanomezana.
Satria ny kabine rehetra mety hahazo fofona, noho ny hamandoana ankoatry ny zavatra hafa ary manana a mpanadio rivotra Ny voajanahary eo anelanelan'ny akanjo dia hisorohana izany fofona izany tsy hanaraka lamba. Tsy mila mampiasa simika ary tsy mahay zaitra. afaka mamorona mpanamboatra rivotra ho an'ny kabinetra ianao. Ankoatr'izay dia tsara tarehy tokoa izy ireo ka mahafaly ny manokatra ny arimoara ary mahita ireto harona lamba ireto.
1 Kitapo lamba ho an'ny lalimoara, freshener vita amin'ny vatan-trano
1.1 Dingana isan-kerinandro
Kitapo lamba ho an'ny lalimoara, freshener vita amin'ny vatan-trano
Ireo fitaovana ilaintsika dia:
Lamba misy ny motera tianao, mety milamina ihany koa izy io. Tsy zava-dehibe ny fitaovana, fa ny landihazo no tsara kokoa
Potpourri na voninkazo maina
Adhesive ho an'ny lamba
fanamarihana toerana lamba
Toetran-tsiranoka lavender, kanelina, na hanitra ankafizinao
Isika aloha dia hanao sary ny fandrefesana amin'ny lamba ilaina hamoronana kitapo lamba. Ireo refy ireo dia eo ho eo ary tsy mila marina akory.
Nanapaka lamba roa izahay mba hamoronana kitapo tsirairay ny lamba. Izahay dia nanapaka lamba lamba araka izay tadiavinay, mety samy hafa habe izy ireo.
Miatrika ireo sombin-damba sy asio dity lamba malemy paosy. Apetrakay ireo sombin-javatra roa ary tsindrio. Azonao atao ny mametraka paosy akanjo mba hankafizan'ny firaisana raha maina ny lakaoly.
Manamboatra sisiny kely koa izahay eo am-baravarana avo indrindra, ka hitandrina kokoa. Averinay ny dingana amin'ny sombin-damba rehetra, mandra-pahatonganao manana kitapo lamba firakotra araka izay tianao hatao.
Avelantsika ho maina tanteraka ilay dity, rehefa vonona izy, Atsimbadinay ireo kitapo lamba.
Feninay voninkazo maina ireo kitapo lamba na ny vilany tanimanga. Na dia efa manana fofona aza izy ireo, dia manampy ranon-tsiranoka misy ranoka vitsivitsy izahay mba haharetana sy maharitra kokoa ny fofona.
Izahay dia manidy ny kitapo lamba amin'ny fehin-kibo. Nanapaka tapa-kofehy satin izahay ary namatotra azy tamin'ny elastika mba handravahana ny kitapo manitra ho an'ny lalimoara. Ary vonona, efa vonona ny kitapontsika hapetraka eo amin'ny fitafiana, ny vatasarihana fandriana ary koa, handravahana talantalana ary aromatize ny efitranonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa tanana an-trano » Kitapo lamba handoroana ditin-kazo manitra
Hippie pendant vita amin'ny CD
Tsoratadidy fingotra Eva